wiil yar waraq Illahay – Xeernews24
17. Juni 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Wiilyar oo Ilahay Warqad u qoray.W,q.Qareen Kadar Aar
Ninka reerka masuulka ka ah ayaa waxa uu Inanyar(wiil) uu dhalay ku barbarin jiray in markasta oo la yidhaah’do yaad Aduunka u jeceshahay in uu yidhaah’do ALLAH ,kadibna Inankii yaraa waxa uu noqday mid qalbigiisa ay dagtay kalmadda Jacaylka ALLAH ,iyada oo lagaba yaabo caruurnimada darteed in aanu waxbadan ka faham sanayn macnaha badan iyo fa’idada ku jirta Jeclaanshaha ALLAH.
Muddo yar ka bacdi waxaa si xun u xanuun saday Odaygii Reerka ka masuulka ahaa,madamaa ay ahayeen marka horaba reer faqiira oo aan lahayn wax dhaqaale ah, waxa dhacday in Odaygii uu tahli waayo in xataa uu waayo wax uu Daawo siisto ha’yarato amma habadatee,kadibna waxa uu noqday Nin Dhul yaala oo Xanuun dishooday.
Sida cadada inoo ah hadii aynu nahay Dadka Muslimiinta ah,waxa jira in aynu soo booqano dadkeena bukaan jiifka ah,kadibna marka aynu ka anba’baxayno waxa aynu qofkii Xanuun’sanayay ku maca’salamaynaa kalmada ah ALLAH ha ku caafimaadiyo, taasi oo ah duco loogu ducaynayo in Ilahay Bukanka cafimaad ugu badalo.
Kadibna Inankii yaraa waxa maskaxdiisa ku soo dhacday ,ALLAHAN ay dadku leeyihiin ha ku cafimaadiyo miiyaanu ahayn midkii uu Abahay aadka u jeclaa ee uu adigana ku odhan jiray marka lagu yidhaah’do yaad jeceshahay waxaad tidhaa ALLAAH.
Inankii yaraa waxa uu Go’aan saday In uu ALLAH uu Warqad u qoro kagana dalbanaayo in uu Abihii u caafimadiiyo,inankii yaraa waxa uu u tagay Hoyadii waxanu u sheegay in uu doonayo in uu ILAHAY Warqad u qoro uu kaga codsanaayo in uu Abihii u caafimaadiyo ,ilayn waa meel ILAHAY wax ka wadee Hoyadiina waa ay ka ogolaatay.
Intii aanay Dawladu qoraalkii warqada aanay go’aan ka gaadhin ,ayaa Warqadii waxaa lagu qoray Jaraa’idka dalka kasoo baxa,taasi oo la leeyahay waxaa Boostada laga helay Warqad uu soo qoray Ilmayar kuna socota ILAHAY.
Akhristayaal Reerkii waxa uu ku danbeeyay Odaygii oo Ilahay cafiidkisii usoo celiyay, Reerkii oo noqday mid hodana oo Ilahay Risiiqiisa waasica ah uu u furay .taasi oo ay ku heleen Kalsoonidii iyo Xuskii Ilahay ee aan marnaba Carabkooda ka go’ayn .